November 2020 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 Nov 30, 2020 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 15-04-1442 …
14 Askari Kenyaati ah Oo Lagu dilay Qarax Ka Dhacay Mandheera.
Inkabadan Toban Askari Oo lagu dilay Qarax ka dhacay MandheeraFaafahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashey qarax xoogan oo dhulka NFD lagula eegtay ciidamada dowladda Kenya. Qaraxa oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo…
Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Isniin,Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 15-4-1442 oo waafaqsan 30-11-2020, Warka…
Weerar Khasaare Dhaliyay Oo Ciidamada Kenya Lagula Eegtay Mandhera.
Weerar ay dhimasho Iyo dhaawac ku noqdeen askar ka tirsan dowladda Kenya ayaa ka dhacay degmada Lafeey ee gobolka Mandheera. Weerarkaan oo ahaa mid qarax ah ayaa waxaa maalintii shalay lala beegsaday ciidamo katirsan booliska…
Weerar Cagmarin ah Oo Lagu Qabsaday Gawaari Dagaal Oo ka dhacay Mudug.(Dhagayso)
Waaberigii hore ee saaka, ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar culus waxay ku qaadeen saldhig ciidan oo deegaan katirsan gobolka Mudug ku leeyihiin ciidamo katirsan Dowladda federaalka. Ciidamada milliteriga Xarakada…
Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Isniin ,Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 15-4-1442 oo waafaqsan 30-11-2020, Warka…
Mid kamid ah Culimada Shaam Oo Qoray Risaalo uu Ku difaacayo Rasuulka SCW.
Axmad	 Nov 29, 2020 0
“ Hadalka Fudud ee ka hadlaya waajibnimada in Rasuulka Salla-llaahu Caleyhi wasallam loogu hiiliyo in qooraha la gooyo, lana nooleeyo waajibka Argagax gelinta” waa maqaal uu qoray Sheekh Saamil Cureydi oo kamid ah culimada Mujaahidiinta…
Banaanbax Lagu Difaacayo Rasuulka Oo Ka Dhacay Gobolka Mudug. (Dhagayso)
Waxaa degmada Jowle ee wilaayada islaamiga ah ka dhacay bananabax ballaaran oo ay ka qeybgaleen qeybaha kala duwan e bulshada, kaas oo lagu difaacayay Rasuulka SCW. Waxay banaanbaxa dadka isugu yimid shaaca ka qaadeen iney wax weliba u…
Dad Soomaaliyeed Oo Lagu Dilay Koonfur Africa.
Wararka ka imaanaya dalka Koonfur Africa ayaa ku waramaya in dad Soomaaliyeed lagu dilay dalkaas, kadib markii koox tuugo ah ay weerar ku qaadeen dukaamo ganacsi. Ugu yaraan hal Ruux oo Soomaali ah ayaa la dilay, halka la dhaawacay…
Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Sabti,Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 14-4-1442 oo waafaqsan 29-11-2020, Warka…